लगातार १६ घण्टासम्म काम गर्दा यसरी बाफिय डा.प्याकुरेल का हात !
वैशाख, काठमाडौं । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरका डा. विनोद प्याकुरेलको हात्केला चाउरी परेको र पटपटी फुटेको जस्तो देखिन्छ ।
बेडमा कोही छटपटाइरहेका हुन्छन् । कोही कराइरहेका हुन्छन् । सास फेर्न गाह्रो भयो भनेर हामीलाई बोलाइरहेका हुन्छन्,’ डा. प्याकुरेल स्मरण गर्छन्, ‘थोरैलाई बचाउन नसकिए पनि धेरैको जीवन बचाएर घर फर्काउन पाउनुलाई नै आत्मसन्तुष्टि ठान्दछौं ।’
२०७८ बैशाख १४, मंगलवार १६:४०0Minutes 161 Views